हुन सक्ला त् कृषिमा आत्मनिर्भर ? – Newsagro.com :
हुन सक्ला त् कृषिमा आत्मनिर्भर ?
June 9, 2016 June 10, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture, Agriculture Minister Of Nepal Haribol Gajurel, earthquake भूकम्प, fish, kathmandu, maize, Moad कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, Nepal, Nfgf Nepal राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल, policy, rice, Uddhav Adhikari उद्धव अधिकारी, vegetable, Wheat, दाल Pulse
काठमाडौं / कृषि विकास मन्त्रालयले निवार्हमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायीक उत्पादनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन लिएको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम हुन नसक्दा कृषि उपजको उत्पादनमा ठूलो अन्तरले वृद्धि हुन सकेको छैन । तर, माग धान्नका लागि आयात बढ्दै गएको छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने बहानामा ठूलो रकम अपारदर्शी ढङ्गले अनुदान बापत बितरण भइरहको छ । गत आर्थिक बर्ष ०७१/७२ मा नौ अर्ब अनुदानमा खर्च गरेको मन्त्रालयले चालू आवमा १२ अर्ब खर्चका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै बाली उत्पादनका लागि घोषित कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भएपनि उत्पादन वृद्धिमा सफलता मिलेको छैन ।
सरकारले आगामी दुई बर्षमा धान उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने चालम निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि चालू आवमा ६ अर्बको मात्रै चामल आयात गर्दा माग धान्ने सरकारको लक्ष्य विपरित नौ महिनामा १६ अर्ब १८ करोडको चामल आयात भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चालू आवमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पुरा भएका छैनन् । पहिलो बर्षको लक्ष्य नै पुरा नहुदा सरकारले लिएका सबै दीर्घकालिन् लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादन(जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ मा अघिल्लो बर्षको तुलनामा खाद्यान्न तर्फ धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै र कोदोको उत्पादनमा ६.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
लक्ष्य : सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा १४ अर्ब रुपैयाको चामल आयात भएको तथ्यांक देखाउदै चालू आवमा उत्पादन हुने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात ६ अर्बमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा धान खेती भएकोमा चालू आवमा बढाएर १ लाख ४४ हजार हेक्टरमा पु¥याउने र प्रतिहेक्टर उत्पादन क्षमता ३.१७ टनबाट बढाएर ३.४३ टनमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
यसरी उत्पादन बढाएर आव २०७४/७५ मा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई चामल आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
बास्तविकता : चालू आवको नौ महिना (चैतसम्म) मा १६ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४ हजार ३ सय ८७ रुपैयाको चामल आयात भइसकेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । चालू आवमा लिइएको लक्ष्य नै पुरा हुन नसक्दा सरकारले दुई बर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन लिएको लक्ष्य पुरा नहुने देखिन्छ ।
लक्ष्य : गत आवमा ५ अर्बको मकै आयात भएकोमा चालू आवमा २ अर्ब ५० करोडको मात्रै मकै आयात गर्ने गरी उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । ८ लाख ४९ हजार हेक्टरमा मकै खेती भएकोमा यो बर्ष बढाएर ८ लाख ५५ हजार हेक्टरमा मकै खेती गर्ने र २.३५ टनका उत्पादकत्वलाई बढाएर २.४ टन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा मकै आयात १ अर्बमा झार्ने र त्यसपछि आत्मनिर्भर उन्मुख हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ६ अर्ब ९ करोड ९८ लाख २६ हजार ५ सय ३० रुपैयाको चामल आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । आवको अन्त्यसम्म लक्ष्य विपरित मकै आयात २ अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको आयात हुने केन्द्रको अनुमान छ ।
लक्ष्य : गत आवमा ४ अर्बको दाल आयात भएकोमा चालू आवमा आयात ३ अर्ब ४१ करोडमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । ३ लाख ३३ हजार हेक्टरमा दाल खेती भइरहेकोमा यो बर्ष बढाएर ३ लाख ३५ हजार हेक्टर पु¥याउन र प्रतिहेक्टर उत्पादन १.०७ टन रहेकोमा बढाएर १.१ टन पु¥याउने लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा आयात १ अर्ब ३९ करोड रुपैयामा झार्ने र क्रमश ः आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ।
बास्तविकता : चालू आवको ९ महिनामा ७ अर्बको दाल आयात भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा दोब्बर बढी आयात हुने देखिएको छ ।
लक्ष्य : चालू आवमा १३ करोडको तरकारी आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २ लाख ४८ हजार हेक्टरमा भइरहेको खेतीलाई बिस्तार गरी २ लाख ४८ हजार ५ सय हेक्टरमा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवबाटै आयात सुन्यमा झर्ने गरी आत्मनिर्भर हुने र आव ०७४/७५ मा ८३ करोडको तरकारी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ५ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ५० हजार नौ सय रुपैयाको तरकारी आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले व्यावसायीक तरकारी खेतीका लागि ब्याज अनुदानमा सहज कर्जा, अनुदान र युवालाई आकर्षण गर्न बर्षेनी अरबौं खर्च गर्दै आएपनि लगानीअनुसारको प्रतिफल नआउदा आयात आकासिरहेको हो ।
लक्ष्य : गत आवमा ४७ करोड ३३ लाखको माछा आयात भएकोमा चालू आवमा आयात दर झारेर १२ करोड १८ लाख रुपैयामा कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गत बर्ष ८ हजार २० हेक्टरमा माछा पालन भएकोमा यो बर्ष ९ हजार २ सय २० हेक्टरसम्म बिस्तार गर्ने र ३१ हजार टन उत्पादन भइरहेकोमा बढाएर ३६ हजार टन पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी आव ०७३/७४ बाटै आयात नगरी ६ करोडको निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाको माछा आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । बर्षेनी आयात दर बढिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
एक खर्बको कृषि बस्तु आयात
चालू आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को नौ महिना (चैतसम्म) मा १ खर्ब २ खर्ब ८२ करोड १० लाख २ हजार ८ सय २९ रुपैयाको कृषिजन्य बस्तु आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईका अनुसार चामल १६ अर्ब १८ करोड, मकै ६ अर्ब ९ करोड, दाल/गेडागुडी सात अर्ब २५ करोड, तरकारी ५ अर्ब ९४ करोड, माछा ५३ करोड, दुग्ध जन्य पदार्थ ८६ करोड रुपैयाको आयात भएको छ । त्यस्तै मासु ७४ करोड, चिया ४१ करोड र अन्य सबै कृषिजन्य बस्तु ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाको आयात भएको उनले जानकारी दिए ।
माटो सुहाउदो नीति चाहियो
सरकारले नेपाल सुहाउदो कृषिसम्बन्धि नीति, नियम नै बनाउन सकेको छैन । हामीले नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउनका लागि अहिले तुर्जमा सबै सबै नीति नियम संशोधन गरी यहाको माटो सुहाउदो बनाउन सबै क्षेत्रबाट पैरवी हुनु जरुरी छ । दुई छिमेकी मुलुकको उत्पादनसग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति छ । सरकारले विनियोजन गरेको कृषि बजेट पनि कृषि मजदुर, निम्नवर्गीय किसान जस्ता तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले उत्पादन प्रकृयामा प्रत्यक्ष भाग लिन्छन् । उत्पादन गर्ने किसानमै जा“गर पैदा गर्न नसक्ने र स्रोत, साधन माथिल्लो तहबाटै उपभोग गर्दै जाने प्रवृत्तिले आत्मनिर्भरको योजना ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
किसानमा जागर पैदा गर्नु जरुरी छ
कृषि विकास मन्त्री
पहिलाको बजेट ल्याउदा स्थिति अर्कै थियो । भूकम्प गयो र सबैको ध्यान त्यतै पट्टि गयो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नाकाबन्दी भयो । ५–६ महिना नाकाबन्दी हुदा स्वभाविक रुपमा उत्पादनमा असर प¥यो । पहिले बजेट पनि अली पुरानै ढाचामा आएको छ । यसपाली ल्याएको बजेटमा व्यावसायीक उत्पादन बढाउने गरी पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अवधारणा ल्याएका छांै । यो अवधारणअनुसार काम गर्दा वृहत उत्पादन हुने र आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने स्थिति छ । हामीले किसानलाई उत्साह थप्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा पेन्सन बितरणलाइ समेत सगै लैजाने गरी कार्यक्रम बनाउनु चाही जरुरी छ । किनभने किसानमा जागर पैदा नगरी उत्पादन बढाउन गाह्रो छ ।
← सिस्नुले धानेको डोटेलीको जीबन
बाख्रापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न व्यवसायीको माग →
यो समाचार 30352 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 30028 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 21458 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 2358 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले